My Thoughts My Blog: October 2009
တညနေလုံး Facebook သုံးနေတာ အကောင်း၊ ညဘက်သန်းခေါင်လောက်မှ ဘာထဖြစ်လည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်အကောင့်ကို ပေးမ၀င်တော့ဘူး။ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ပုံတွေအတိုင်းပေါ်လာကုန်ရော။ ဒါနဲ့ ဘရောက်ဇာမျိုးစုံပြောင်းပြီး အကြိမ်ကြိမ်ဝင်တယ်။ ၀င်ရတဲ့ အခါ ၀င်တယ်။ မရတဲ့အခါ မရဘူး။ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဘရောက်ဇာတွေရဲ့ နည်းပညာအမှားများလားလို့ တွေးမိပြီး နိုင်ငံခြားက မိတ်ဆွေကို လည်း ၀င်ခိုင်းပြီးကြည့်တယ်။ ဒီမှာဖြစ်သလိုပဲဖြစ်နေတယ်။ Friend List ကပျောက်ပြီး သုညဖြစ်နေတယ်။ ဒါကပရိုဖိုင်ကို ၀င်ရတုန်းလေး မြင်ရတာ။ Home ကိုဝင်လိုက်တော့ Friend List ပျောက်နေတော့ ဘာဖြစ်တုန်းဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ events တွေနဲ့ Fans လုပ်ထားတဲ့ဆီက events တွေပဲတက်နေတယ်။ သူငယ်ချင်းစာရင်းရှိလူများ ရဲ့ events တွေလုံးဝ မရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန့်မန့်လေးတွေမှာ ပေါ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ လင့်ကို နှိပ်ပြီး သူ့ပရိုဖိုင်ကို သွား. ရောက်မှ.. ကိုယ့် ပရိုဖိုင်ကို ပြန်ဝင်တော့လည်း ပြန်ဟုတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါတွေရဲ့ စုစုပေါင်းကြာချိန်က ၄၅ မိနစ်လောက်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ Facebook ကို ဘန်းပြီလားဆိုပြီး ကျော်ခွဝင်တော့လည်း အဲ့လိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ခုတော့ ရေးရင်း လုပ်ရင်းနဲ့ တော့ ပြန်ရနေသလို။ ဘာတွေများလည်းကွယ်။ ဖိုးသူတော်ကို ရွာသူများ နှောက်ယှက်လေရောသလား။။
PS. ပြောရင်းဆိုရင်းကို Home မှာ တခြားသူတွေရဲ့ events တွေပျောက်ကုန်ပြန်ပြီး။ လည့်စားလေသလား မျက်နှာစာအုပ်ရယ်။
၃နာရီ ၅၂ မိနစ်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 4:14 AM
နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ ခိုတွဲသီနေတဲ့ ချစ်ခြင်း.
ရေစက် ကလေးတွေ ခိုတွဲနေသလို
အချစ်ဆိုတာ တွေ ပါနေတယ်..
ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ ခိုတွဲနေတဲ့
အချစ် စကားလုံး ရေစက်လေးတွေက
ဒါကို မသိတဲ့ သူတွေက
သွားရည် တမြားမြား ကျတယ်ထင်မယ်
ခု အောက်ကျလုကျခင် နှုတ်ခမ်းထောင့်မှာ
မလုပ်ပါနဲ့ ဒီလို လှောင်ပြောင်မှုလေးတော့
အဲ့ဒီ နှုတ်ဖျားမှာ သီတွဲခိုနေတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေဟာ ..
ဟိုး.. စကြာဝဠာ အဝေးဆီက လွင့်စင်လာတဲ့
နူးညံ့မှုတွေ အားလုံးရဲ့ ကမ်းဆုံး..
တိကျ ရုပ်နာမ်မရှိတဲ့ မေတ္တာဆိုတာနဲ့ ပေါင်းစုံမိပြီး
ငါမင်းကို ချစ်တယ်လို့ ပြောထွက်ခဲ့တာပါ
ငါ့ရင်ထဲက ချစ်ခြင်းတွေကို ထုတ်ပြခဲ့တာပါ...
ဒီချစ်ခြင်း ရေစက်ကလေးရဲ့ အဆုံး..
ဒါတွေ ပေါင်းစုံပြီးမှ ချစ်ခြင်းကိုလက်ခံ တုန့်ပြန်မှုတော့ ပေးပါ..
နှုတ်ခမ်းထောင့်လေး ကွေးရုံ ပြုံးသွားတယ်.
ကြယ်ကလေး လက်ခနဲ့ တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး..
၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်..။ ။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 4:15 AM
အနုပညာဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်နှင့် များစွာမနီးကပ်သလို များစွာလည်း မဝေးကွာပါ။ အကြောင်းမူ ကျွန်တော်သည် စာအုပ်စာပေများကို နှစ်သက်သည်။ ကဗျာများ၊စကားပြေအရေးများ၊အက်ဆေးများ၊ ၀တ္ထူတို ရှည်များ၊ ကျွန်တော်နားလည်နိုင်သော ပန်းချီကားများ၊ တခြားသော ဖန်တီးမှု အနုပညာများ အစရှိသည်တို့ ကို သဘောကျသည်။ ဒါကိုပဲ အနုပညာနှင့် မဝေးဟု ပြော၍ရသည်။ တနည်းဆိုပြန်သော် ကျွန်တော် သည် အနုပညာရှင်လို့ ပြောလို့ရသူများလို အနုပညာဖန်တီးမှု အားနည်းသည်။ ကဗျာဆိုလျှင်လည်း ခံစားချက်သက်သက်များကို စကားလုံးနည်းစွာနှင့်သာ ဖန်တီးနိုင်သည်။ စကားလုံးကြွယ်ဝစွာ နိမိတ်ပုံများစွာ ဖြင့် မဖန်တီးတက်ပါ။ ထိုသို့ခံစားချက်ကိုပင် အနုပညာမြောက်စွာ ဖန်တီးထားသော ကဗျာများ စာများကို များစွာနှစ်သက်သည်။ ၀တ္ထူဆန်ဆန်ဆိုလျင် စိတ်ကူးထဲမှာပင် ဇာတ်အိမ်လေးဆောက်မိသလောက်ပဲ ရှိသည်။ စာရွက်ပေါ် ချ၍ပင် မရေးမိချေ။
လူတို့သည် မိမိတို့လက်ခံနိုင်သလောက်ကိုပင် လက်ခံနိုင်သည်။ ထိုထက်ပို၍ လက်ခံလိုလျှင်သော် လည်းကောင်း လက်ခံမိလျှင်သော်လည်းကောင်း အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ဖြစ်ထွန်းနိုင်မည် မဟုတ်ဟုယူဆပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒါလေးနှင့်ပင် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတော့မည် မည်သို့မျှ အသစ်ကို ဖန်တီးတော့မည် မဟုတ်ဟုပြောလိုရင်း မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ အနုပညာမြောက်ခြင်း အနုပညာဖြင့် နေထိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ကျွန်တော်သည် မပိုင်နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ အစရှိသော စကားလုံးများကို သေချာ နားမလည်၍သော်လည်းကောင်း ထိုကဲ့သို့ပြုမှုနေထိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့် လည်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်ပါသနည်းဆိုသော် ကျွန်တော်သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေစွာ နေထိုင်ပါသည်။
အနုပညာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သူများကို အနုပညာရှင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တနည်း သူလုပ်တက်သော အလုပ် သူ့ဘ၀အတွက် လုပ်သင့်သော အနုပညာအလုပ်ကို လုပ်နေသောသူများဟု လည်းကောင်း မြင်ပါသည်။ ထိုသို့မြင်ခြင်းမှာ သာမန်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သာမန်ထက်ပို၍ တနည်းပြောဆိုလျှင် အနုပညာ မြောက်စွာ နေထိုင်၍ အနုပညာမှ အနုပညာဟု၍ မျက်စိမိတ်အော်မည့်သူများကို ကျွန်တော် ပြောဆိုနိုင်ရန် စကားလုံးမရှိပါ။ မပြောဆိုတက်ပါ။ အနုပညာသည် ဖန်တီးမှုလည်း ပါသလို အနုပညာရှင်၏ စိတ်သန္တာန်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ကွန့်မြူးလာသော ကိစ္စရပ်များကို ကြားခံမီဒီယံ တစ်ခု အသုံးပြု၍ ဖော်ထုတ်ပြသခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အနုပညာရှင်၏ ဖန်တီးမှုအားနှင့် စိတ်သန္တာန်ကွန့်မြုးမှုပေါ်မူတည်၍ များစွာ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ စိတ်သန္တာန်မှ ဆိုသော်လည်း တစ်ချို့ လုပ်၍ယူထားသော အရာများနှင့် ပေါင်းဖက်မည်ဟု ထင်ပါသည်။
ထိုပြင် ကျွန်တော်သည် မည်သို့သောသူများကို အနုပညာရှင် မည်သို့သူများကတော့ အနုပညာရှင် မဟုတ်ဟူ၍ သေချာစွာ မခွဲခြားနိုင်သေးပါ။ စာရေးဆရာကို အနုပညာရှင်ဟုပြောရမည်ဆိုလျှင် စာရေးတိုင် အနုပညာရှင် ဖြစ်မည်ဟု ပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စာရေးရာတွင် ရသစာပေ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ ရသစာပေ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မည်။ သမိုင်း ၊ ဇီဝဗေဒ ၊ မနုဿဗေဒ၊ ဘူမိဗေဒ ၊ ဥပဒေ၊ စီးပွားရေး ၊ဆေးပညာ ၊ နည်းပညာ အစရှိသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ ရေးသား လျှင်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရေးသားသောသူများကို အနုပညာရှင်ဟု ခေါ်၍ရမည် မဟုတ်ဟုထင်ပါသည်။ ပန်းချီဆရာသည် အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းဆရာသည်လည်း အနုပညာရှင် ဖြစ်ပေသေးသည်။ သို့သော် ကားနံပါတ်ရေးခြင်း၊ ဆိုင်ခန်း အိမ်ခန်းများ ဆိုင်းဘုဒ် ရေးသားသူသည် အနုပညာ ရှင်ဟု ပြော၍ရမည်မဟုတ်ပါ။ တနည်းဆိုသော် ဖန်တီးမှုနှင့် စိတ်သန္တာန်မှကွန့်မြူးမှုကို အရင်းခံ၍ လုပ်ဆောင်တက်၊ဖော်ပြတက်သော သူများကို အနုပညာရှင် ဟု ပြော၍ရမည်ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ဘ၀တွင် အနုပညာရှင်ဟု ပြော၍ရသော တနည်း အနုပညာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးကြောင်းပြု သောသူများနှင့် များစွာ မပေါင်းဘူးပါ။ အဆိုတော်၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ အစရှိသဖြင့် သာမန်သိကျွမ်းသူ များသာ ရှိသောကြောင့် အနုပညာရှင်ဟု ပြောဆိုလို့ရမည်သူများနှင့် သူတို့၏ဘ၀နေထိုင်ပုံကို သေချာမသိပါ။ သာမန်အချိန်တွင် သာမန်သာနေထိုင်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ အနုပညာအလုပ်လုပ်နေသောအချိန် အနုပညာ ဇျန်ဝင်စားနေသော အချိန်ဆိုလျှင်တော့ သာမန်ထက်ပိုမည်ဟု ထင်ပါသည်။
ကဗျာများ၊ ပန်းချီများ၊ စာများကို ဖတ်ရှု့ကြည်ရှု့သော်လည်း ကျွန်တော် နားလည်နိုင်မှု ကျွန်တော်မြင်သွားသော အမြင် ကျွန်တော့်လက်ခံနိုင်မှုနှင့်သာ ကျွန်တော်တိုင်းတာပါသည်။ ဖန်တီးထားသော အနုပညာရှင် ပေးချင်သော ပြချင်သော ပြောချင်သော အရာကို ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုသာ ရနိုင်ပါသည်။ အတင်းအကျပ်ကြီး လုပ်၍မရသော အရာများဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုသော သာမန်လူချက်ချင်းသိနိုင်သော ကိစ္စများကို ကျွန်တော် လက်ခံ၍ မရ မသိဘူးဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော့်၏ အသိဥာဏ်တိမ်မှုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် မသိပါပဲနှင့် ကောင်းပါသည်၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ ဘယ်လို ဘယ်ပုံဆိုသည်ကို မပြောဆိုတက်ပါ။ ပြောဆိုမည်ဆိုလျှင်လည်း မြင်းထိန်းငတာလို ငဖြီးသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်သည် အနုပညာ ဂီတ နှင့်ပတ်သက်လျှင်လည်း အနည်းတော့ သူများထက်စာလျှင် ဝေးကွာပါလိမ်မည်။ ဂီတကို မခံစားတက်လို့တော့ ဟုတ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဂီတ ဆိုသည်ကို တိရစ္ဆာန်များပင် ခံစားနိုင်စွမ်းရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။ တနည်းဆိုသော် ကျွန်တော်သည် ဆူညံပေါက်ကွဲလွယ်သော သီချင်းများနှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သောသူ မဟုတ်ပါ။ အေးစက်စက်ဆိုလျှင်လည်း သည်းခံကာနားထောင်နိုင်စွမ်းတော့ ရှိပါသည်။ သာမန်ရိုက်ချက်များနှင့်သာ တီးသော ဂီတများနှင့် ဖန်တီးမှုများနှင့် ပိုမို၍ သဟဇာတ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင်လူတို့ တီးခက်သော အနုပညာပစ္စည်းများမှ ထွက်သော အသံများကို များစွာသဘောကျပါသည်။ လေ့လာမှုအားနည်း၍ လူတီးခက်သော များစွာသော အနုပညာပစ္စည်းများကို နားမထောင်ဘူးသော်လည်း နားထောင်ဘူးသမျှ ဗုံ၊ ပတ္တလား၊ စောင်းမှ စ၍ မဒလင်၊ ဂစ်တာ ၊ တယော၊ စန္နယား နှင့် တီးဝိုင်းသံများထိ နှစ်သက်ပါသည်။ ဆူညံပွက်လောရိုက်နေပြီဆိုလျှင်တော့ အခြေအနေ အချိန်အခါအရသာ လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိပြီး သာမန်ဆိုလျှင်တော့ လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများသည် ကျွန်တော်၏ တသီးပုဂ္ဂိုလ သိမြင်မှုသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့သော အနုပညာ အလုပ်ဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပြုနေသူများ၊ အနုပညာရှင်များကို ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံစဉ်းစားမိသည်များကို ရေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်နှင့် အနုပညာမှာ အနီးကြီး မဟုတ်သလို မဝေးသေးသည်ဟု ပြောလို့ရပါသည်။
၂နာရီ ၄၉ မိနစ်။
ရေးသားသူ phoe thu taw at 3:02 AM